အလဲအကွဲငြင်းခုန်ခဲ့တဲ့ စကားသံတွေ၊ ဇာတ်ကြောင်းတွေ
ဟာရီယို၊ ဒိုင်ကြောင်၊ ကက်ပချီနို အားလုံးက
ဒီမှာ စက္ကန့်တိုင်းသတိရနေမယ်ဆိုတာ ညာတာ
အကြင်နာစစ်ရင် ကို ကြားတိုင်း
ကျမ အဝေးကို သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ကျမရဲ့ ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းမလေးတွေက ကျမအတွက်ဆိုပီး ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး ၂ ပုဒ်ပါ. ဆက်စပ်ပီး ရေးထားတာမို့ တစ်ဆက်တည်း ဖော်ပြလိုက်တာပါရှင်။
သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းကလေးတွေရဲ့ ကျမအပေါ် သူတို့ထားရှိတဲ့ ခင်မင်မှုတွေကို သိခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျမ ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်။ ကျမရဲ့ သူတို့အပေါ် ထားရှိတဲ့ ခင်မင်မှုတွေကိုလဲ သူတို့အတွက် သီးသန့်အကန့်လေးထဲမှာ အမြဲထည့်ထားပါတယ်။
at 2:58 AM Labels: ကဗျာ၊ အမှတ်တရ
little brook August 14, 2009 at 3:43 AM
ချစ်ခင်လေးနက်သော သူငယ်ချင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ရတာလည်း မင်္ဂလာတစ်ခုပဲ ... ညီမလေး ကံကောင်းတယ် ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော့်ကိုကဗျာရေးပေးတယ့် သူငယ်ချင်းမရှိဖူးဘူး ... အဲသူငယ်ချင်းကောင်းတွေတော့ရှိတာပေါ့ :)
Yu Ya August 14, 2009 at 6:09 AM
ကဗျာလေး ဖတ်သွားပါတယ် အနော်ရေ..။ ဒီလို သူငယ်ချင်းမျိုးရှိတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။
ahphyulay August 14, 2009 at 7:13 AM
အေးမြသန့် ရှင်းတဲ့ သံယောဇဉ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။မေ့ မရလို့ တွေးလေ
yangonthar August 14, 2009 at 11:00 AM
ဟုတ်တယ် အနော် သူငယ်ချင်းဆိုတာ သွေးမတော်တဲ့ဆွေမျိုးတွေပဲလေ ......ဒါပေမယ့် အဲဒီဆွေမျိုးလေးတွေမှာ သွေးတော်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေထက် ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေ ရှိတယ် ..... ကျနော် မှတ်ထားတဲ့စာကြောင်းလေး တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးမယ်ဗျာ .... အင်္ဂလိပ်လို တော့ ရေးတတ် တော့ဘူး :D ဗမာလိုပဲကောင်းပါတယ်နော် ..... “တခြားသူတွေ သူ့ တို့ အကြောင်း သူတွေးနေချိန်မှာ ကိုယ့်အကြောင်းတွေးနေ တဲ့သူငယ်ချင်းဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ပါ ....”
သူငယ်ချင်းချစ်သော အနော့်အတွက် ..... ကိုရန်ကုန် .... :D
စိတ်၏ဖြေရာ August 14, 2009 at 12:58 PM
Angel Shaper August 14, 2009 at 4:20 PM
အနော်။ ကံကောင်းလို့အားကျသွားတယ်နော်။
သူငယ်ချင်းကောင်းပီသချင်ရင် ကဗျာလေးစပ်ပေးပါ။ ဒါပဲ။ အဟဲဟဲ
သားကြီး August 15, 2009 at 1:11 AM
အနော်က ဖြေသာသေးတာပေါ့ လွမ်းရင်တောင်မှ အလွမ်းပြေသူငယ်ချင်းတွေရေးပေးတဲ့ကဗျာလေးရှိသေးတယ်
အပေါ်ကတစ်ပိုဒ်ဟာ စုကလေးရေးတဲ့ကဗျာထင်တင် ဟုတ်လား?
စာသားလေးတွေ သစ်သလို ကဗျာအတိမ်းအယိမ်းတွေကလည်း
လှတယ် ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပေါ့ :)
ဧရာဝတီသား August 15, 2009 at 6:33 AM
စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ၀ါသနာပါတဲ့ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းလေးတွေ ရှိတာ ငါ့ညီမ ကံကောင်းပါ့ကွယ်။ ကဗျာလေးတွေလည်း အရေးတော်ကြပါတယ်၊ သူငယ်ချင်း အပေါ်ထားတယ့် သူတို့ သံယောဇဉ်ကိုလည်း ထင်ရှားရှား မြင်ရတယ်။ ကဲ ...သူငယ်ချင်းတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြန်စုံစည်းကြ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွား ပါတယ်ဗျား။